Fanjakana Mitambatra - Wikipedia
Ny Fanjakana Mitambatra na Fanjakana Mitambatr' i Britaina sy Irlanda Avaratra, dia fanjakana mahaleotena ao Eoropa andrefana niorina tamin'ny 1801. Ireo fanjakana nanorina ilay Fanjakana Mitambatra dia i Britaina Lehibe (Great Britain) (Englanda, Ekôsy, ary Valesa) sy i Irlandy Avaratra.
Sainan'i Fanjakana Mitambatra
Fisian'i Fanjakana Mitambatra ao Eoropa ary ao amin'ny Vondrona Eoropeana (miloko maitso)
Sahabo 66 921 307 ny mponina tamin' ny 2019 . Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialy. Ny renivohitra dia ny tanàndehibe London.
Ohatra amin' ny olona avy any amin' ny Fanjakana Mitambatra izay nanao fandaharana amin' ny fahitalavitra, sy/na nanoratra boky, momba an' iMadagasikara: David Attenborough, Brian Cox, George McGavin, Charlotte Uhlenbroek sy David Bellamy. Roa karazana ny zavamanan' aina eto Madagasikara nomen' i David Attenborough anarana: ny angidina Acisoma attenboroughi sy ny makamba Ctenocheloides attenboroughi.
↑ World Population Review - United Kingdom
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanjakana_Mitambatra&oldid=1040906"
Dernière modification le 4 Desambra 2021, à 08:33
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2021 amin'ny 08:33 ity pejy ity.